XASAN SHEEKH: “Dowladnimo waaya aragnimo waaye ee ha nala warsado, waxaan sharci ku saleyneyna Dowladdu ma fulin karto” – Maanta Online
Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynihii ka horeeyay Dowladda haatan uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa khudbad uu ka jeedinayay shir ay lahaayeen madasha xisbiyada siyaasadda, kaasi oo ay ku midoobeen xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira qaarkood waxaana Guddoomiye u ah Madaxweynihii Dowladda federaalka Sheekh Shariif Sh. Axmed oo halkaasi lagu caleema saaray xilka cusub.
Khudbadda Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu uga hadlay arrimo fara badan, isagoona si kulul ugu dhaliilay Dowladda Federaalka aanay wax badan qaban marka loo eego arrimaha dib u heshiisiinta, wuxuuna soo qaatay wadahadallada Somaliland iyo Somaliland oo uu sheegay inay taagan tahay meeshii uu isagu uga tegay.
“Raadinta midnimada Soomaaliya meeshii aan uga tegay lagama dhaqaajin” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in arrintaasi ay tahay caqabadaha loo baahan yahay in madashoodu dooneyso sidii ay meesha uga saari lahayd.
Mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka ka dhacaya, wuxuuna ganafka ku dhuftay tallaabooyinka hoggaanka Dowladdu ay arrintaasi u qaadeen oo uu ku tilmaamay inay tahay mid hareer martay wadadeedii isla markaana ay socdaan tallaabooyin ay mudada ugu kororsanayaan.
“Doorasho waa inay dhacdaa 2020-ka, mana aqbaleyno in dib loo dhigo” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Dowladda Soomaaliya oo ugu baaqay xisbiyada siyaasadda ee aan madashooda ka mid aheyn inay ku soo biiraan.
Waxa uu sheegay in yoolka madasha uu yahay sidii dalkaan ay uga dhalan laheyd dowlad u qidmeysa dadka iyo dalka isla markaana waxa uu dalbaday in madaxda Dowladda federaalka si uu uga saxo isaga talo la soo weydiisto.
“Dowladnimo waaya aragnimo waaye ee ha nala warsado” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in shaatiga dowladnimada uu meel suran yahay qofkii uu la’eg yahay gashanayo, wuxuuna ku goodiyay inaysan marnaba aqbaleynin wax aan qaanuunka ku saleyneyn.
Dhinaca kale eedaha faraha badan ee uu Xasan Sheekh u jeediyay madaxda hoggaanka haatan talada haya inay ka mid tahay bedellida Guddoomiyihii Baarlamaanka isla markaana Guddoomiyaha lagu bedelay ay iyagu keeneen.
Marka aad dhadhansato Khudbadda Xasan Sheekh ayaa waxaa ogaaneysaa inay tahay mid ku soo xusuusineysa xilligii uu kursiga ku fadhiyay qaladyada siyaasadeed ee uu galay oo aad uga hooseeya Xukuumadda Madaxweyne Farmaajo, tusaale waxaa ka mid ah inay isku bedeleen 3-Ra’iisal Wasaare kuwaasi oo markii uu Baarlamaanka cod u qaaday kalsooni ka waayay Xildhibaanada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa taasi meesha ka saaray maadaama Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre oo ahaa midkii ugu horeeyay, iyadoo waliba go’aankiisa uu ku ballanqaaday xilligii uu ahaa musharaxa, halka qaladka ugu weyn ee uu galay intii uu xukunka hayay ay ka mid tahay isagoo Faarax Cabdulqaadir siiyay awood ka weyn Ra’iisal Wasaarihiisa kaddib markii Faarax uu ka biyo diiday isku shaandheyn uu sameeyay.
Dagaalka siyaasadeed ee haatan dalka ka socda ayaa u muuqda mid maalinba maalinta ka dambeysa cirka isku shareeraya, waxaana haatan arrinta miiska saaran ay tahay qaabka ay dalka doorasho uga dhici karto xilli uu jiro khilaaf xoogan kala dhaxeeyo Dowladda Federaalka oo dhinac ah, maamulada Jubaland iyo Puntland, iyadoo maamulada K/Galbeed, Hirshabelle aanu wax khilaaf ah kala dhaxeynin.
Maamulka Galmudug oo dhowaan ay ka dhaceyso doorasho ayaa laga filayaa in halkaasi lagu yagleelo maamul dowladda raacsan bacdamaa ay kaalin mug weyn ku leedahay dhismaha maamulkaasi cusub, hase yeeshee khilaafka Dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada labadii xukuumadood ee ugu dambeeyay ayaa ragaadiyay waxqabadka Dowladnimada dalka Soomaaliya oo 30-kii sano ee ugu dambeysay ku soo jirtay marxalado adag oo kala duwan. QORE: Jabriil Maxamuud Nuur (Jabra)
← Yaa ka dambeeyay xil ka qaadistii Guddoomiye Dhoobo Daarood?
21-Xisbi oo si kulul uga hadlay madal dhowaan looga dhawaaqay Muqdisho →